Isi ihe isii dị na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọma | Martech Zone
Ahịa na-anọgide na-eleda ịdị irè nke ozi ederede (SMS) maka mkpọsa ahịa. Ọ bụghị dị ka ọkaibe dị ka ngwa mkpanaka yana webụsaịtị mkpanaka mepere emepe - mana ọ ka dị irè karị. Inweta mmadụ ịdenye aha site na SMS dị mfe karịa ịnweta ha ka ha budata ngwa weebụ mkpanaka site na izipu ozi… na ntụgharị ọnụego nwere ike ịdị elu karịa!
The Akụkụ nke Mgbasa Ozi Ahịa SMS infographic si SlickText egosipụta isi ihe isii dị mkpa iji tụlee mgbe ị na-ezipụ mkpọsa ozi ederede ọ bụla. Ihe eserese ahụ siri ike, ozi ahụ nwere ike ịkpa ike, anyị nwere olile anya na ị ga-anụrịrị ozi a dịka anyị siri tinye ya!
Isi ihe dị mkpa nke Mgbasa Ozi Mgbasa ozi SMS dị irè
Mepụta onyinye bara uru - na-enweghị ya, ị ga-efunahụ ndị debanyere aha bara uru nke nyegoro gị ezigbo ala na ụlọ iji kwalite ha.
Malite na onyinye - iji dọta ma debe ndị ọ bụla debanyere aha ozugbo. Ọ bụrụ na ha chere na ozi gị bụ igbu oge, ha ga-ewepu aha.
Gụnye ịkpọ oku ka emee ihe - na ndị debanyere aha gị nwere ike ime ihe, ma ọ bụ koodu ego ma ọ bụ njikọ njikọ.
Mepụta echiche nke ịdị ngwa - ekwesịrị izipu ozi gị mgbe ịchọrọ ka onye debanyere aha zaghachi ya ozugbo.
Mee ka onyinye ahụ bụrụ naanị - ozi ederede nwere otutu emeghe na ntughari ọnụego, egbula ya na onyinye onu ahia. Mee ka ndị debanyere aha gị chee na ha pụrụ iche.
Kwuo aha gị - yabụ ndị debanyere aha maara onye zitere ya. Ọ bụghị onye ọ bụla na-etinye nọmba ọ bụla na kọntaktị ha.
Budata SlickText's Ntuziaka Ahịa SMS n'ihi na ọbụna ihe ndụmọdụ na optimizing gị ọzọ ederede ozi mkpọsa.
Tags: mobile mkpọsaSMSSMS oku-ime-iheSMS mkpọsasms ctaSMS ahịaSMS na-enyeederede ederede ahiaozi ederedeederede ederede oku na-agaederede ozi mkpọsaederede ederede ctaederede ederede na-enye
Feb 16, 2016 n’elekere 10:00 nke abali
Aka nri. Ahịa SMS bụ ihe ị na-enweghị ike ilelị ọbụna n'oge ndị ahụ. Daalụ!